Goynta Laser-ka iyo Beddelka Summada, Cajaladda, Filimka Wareejinta Dib-u-milicsiga
Laser Cutting and Converting Machine
GOLDENLASER - LASER SYSTEM FOR DIE CUTTING AND FINISHING OF LABELS
Horumarka degdegga ah ee bulshada iyo kala-duwanaanta iyo u-qoondaynta baahiyaha nololeed ee dadka, tikniyoolajiyadda dhijitaalka ah ayaa kor loo qaaday, hababka daabacaadduna si joogto ah ayey isu beddelayaan. Daabacaadda dijitaalka ahi waxay ku noqotay isbeddel aan dib looga laaban karin warshadaha, iyada oo ay sii kordhayaan ganacsiyada gaagaaban, ganacsiyada yar-yar ee la habeeyay, iyo jawiga u habboon, ee looga baahan yahay kharashka keydinta.
Daabacaadda dhijitaalka ah ee shakhsi ahaaneed ayaa soo jiidata calaamado badan iyo sumado daabacaadda daabacaadda sababtoo ah xawaareheeda degdegga ah, tayada sare, wax soo saarka caqliga iyo habka otomatiga.
Fikraddeenu waa inaan siino macaamiisha xalal dhammaystiran oo dhammaystiran summad. Nidaamkeena qaabeynta, waxqabadka sare ee laser dhimista goynta iyo dhameystirka xalalka waxaa loogu talagalay inay la kulanto filashooyinkaaga iyo baahiyahaaga ganacsi ee isbedelaya, sidaa darteed waxaad macaamiishaada ugu deeqi kartaa xalal calaamadeysan oo casri ah.
Mashiinnada leysarka u dhinta leysarka ee laser-ka dahabka ah ayaa si weyn loogu qiimeeyaa soo saarayaasha sumadda maaddaama ay abuuri karaan noocyo badan oo sumado ah hal, xawaare sare, geedi socod si otomaatig ah u shaqeynaya.
Heerka adduunka CO2 RF laser. Tayada la jaray had iyo jeer waa kaamil ah oo joogto ah waqti wakhti leh kharash yar oo dayactir ah.
Hawlaha xaruumaha badan ee qaabdhismeedka ah sida daabacaadda jajabka, xoqida, dahaadhka UV, kala-goynta, iyo dib-u-habeynta, iwm.
Warqad dhalaalaya, warqad gogol ah, kartoon, caag, polypropylene, caag, filim iwm.
Laser wuxuu dhimanayaa nooc kasta oo qaab ah - goyn buuxa iyo goynta dhunkashada (jarista nuska), daloolinta, xardhashada, calaamadeynta, tirinta, iwm.
LASARKA DAHABKA - Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Hordhaca
GOLDEN LASER waa shirkaddii ugu horreysay ee Shiinaha keenta tikniyoolajiyadda dhinta-goynta leysarka ee warshadaha baakadaha & calaamadeynta. Its qaybsan-xawaaraha sare laser mashiinka dhinta-goynta multi-station bedeli karaa taxane ah oo mashiinada shaqo hal dhaqanka sida mashiinka dhaqanka dhinta-jarida, kurka mashiinka, laminating mashiinka, flexo varnish daabacaadda mashiinka, mashiinka feer, iyo rewinder.
Goynta laser-kayaga ayaa goynta iyo dhamaystirka xalalka isku mar ku guulaysan Kala-goynta . Waxay keydisay kharashka qalab badan oo maalgashi, iyo kharashka shaqada iyo keydinta daabacaadda iyo baakadaha soo saarayaasha. Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay daabacadaha sumadaha, sanduuqyada wax lagu rito, kaararka salaanta, cajaladaha warshadaha iyo warshadaha kale.
Camera automatically scans to recognize bar code / QR code.
Waqtiga dejinta aaladda ee naqshadeynta, lammaanaha ugu fiican ee daabacadaha dijitaalka ah.
Xawaaraha Webka 0 ~ 80m / min (Xawaaruhu wuu ku kala duwan yahay sawirada kala duwan, qalabka, dhumucda）
Sax Laser Goynta ± 0.1mm
Width Jarida Laser 340mm
Qaabeynta qaabeynta: kala bixida + hagaha webka + goynta leysarka + goynta qashinka + hal fuulista
fursado badan: daabacaadda dhijitaalka ah / bireed qabow / varnish / daabacaadda shaashadda / goynta fidsan / shaabbad kulul / mindi wareegsan oo goynta / laba laaban ...
QAAR KA MID AH TILMAANTA SHAQAALAHA
Tiknoolajiyada waxsoosaarka waxsoosaarka oo dheereeya
Shirkadda E waa soo saare qoraallo daabacan in ka badan 50 sano Bartamaha Ameerika. Kordhinta amarada-mugga yar ee amarrada la habeeyay, kharashka dhimista-dhimista sumadaha dhaqameed ayaa aad u sarreeya si loo daboolo taariikhda gaarsiinta macaamilka ee la soo gaarsiiyay.
Dhamaadka sanadka 2014, shirkadu waxay soo bandhigtay jiilka labaad ee leysarka dhijitaalka ah iyo nidaamka dhameystirka LC-350 oo laga soo qaaday GOLDEN LASER, iyadoo la dahaarayo isla markaana la marinayo shaqooyin si loo daboolo baahiyaha macaamiisha ee aadka loo habeeyay.
Waqtigan xaadirka ah, shirkaddu waxay noqotay saldhiga ugu weyn ee wax soo saar ee daabacadaha iyo wax soo saarka baakadaha ee gobolka, waxayna ku guuleysatay abaalmarino badan oo ay ka heshay dowladda hoose, iyadoo noqotay shirkadda ugu tartameysa soo saarista sumadaha.
Foornada qaab-yar + leysku dhinto oo lagu jarayo qalab laba-hal ah
Shirkadda T waa shirkad Jarmal ah oo soo saarta sumadaha daabacaadda dhijitaalka ah oo taariikh dheer leh. Waxay leedahay heerar aad u adag iyo shuruudaha soo iibsiga qalabka. Kahor intaysan ogaan LASERKA DAHABKA, dhammaan qalabkooda waxaa laga iibsaday Yurub, waxayna u hamuun qabeen inay helaan qaab-yar oo UV varnish + laser dhinta-goynta laba-in-hal mishiin mishiin. In 2016, sida ay shuruudaha shirkadda T, GOLDEN LASER horumariyo laser kartoo mashiinka goynta dhinta LC-230. Iyada oo xasilloonida iyo saamaynta goynta tayo sare leh, ay aad u qadarin macaamiisha. Isla markii shirkadaha kale ee calaamadaha yurub ay heleen warka, waxay la xiriireen GOLDEN LASER oo waxay u xilsaartay GOLDEN LASER inay soo saaraan nidaam dijitaal laser ah iyo nidaam dhameystir ah oo daboolaya baahidooda shaqsiyeed.
Shirkadda M, oo ah soo-saaraha ugu horreeya adduunka ee sumadaha daabacan, waxay toban sano ka hor ka iibsatay mashiinnada jarjarka leysarka leysarka Si kastaba ha noqotee, qalabka yurubiyanku waa mid qaali ah oo qaali ah in la ilaaliyo, waxay isku dayayeen inay helaan isla nooca mishiinka goynta dhimasha laser. Labelexpo 2015 ee Brussels, indhahooda ayaa iftiimiyay markay arkeen mishiinka goynta leysarka LC-350 ee ka imanaya GOLDEN LASER.
Kadib baaritaan iyo cilmi baaris isdaba joog ah, waxay aakhirkii doorteen GOLDEN LASER LC-350D laba-madax-xawaare sare mashiinka goynta leysarka oo leh waxqabad fiican. Nidaamku wuxuu ku socdaa xawaareyaal gaaraya ilaa 120 m / min, oo leh saldhiga wareega wareega, isweydaarsiga warqadaha duubista iyo nidaamyo kale oo dheeri ah si kor loogu qaado qiimaha dheeraadka ah ee alaabada macaamiisha.
Shirkadda R waa shirkadda ugu weyn adduunka ee ka shaqeysa soo saarista qalabka dharka. Waxay soo bandhigeen in kabadan 10 nooc oo ah silsiladaha HALISKA HALISTA AH ee XY mashiinnada goynta leysarka sanado badan kahor. Maaddaama amarradu sii kordhayaan, qalabkooda hadda jira ma dabooli karo baahidooda wax soo saar. LASERKA DAHABKA ah ayaa soo saaray aaladda leysarka u dhinta goynta leyskugu habeyntiisa, kaas oo inta badan loo adeegsado goynta qalabka milicsiga.
Wareegga duudduuban ee ugu caansan wuxuu noqon doonaa 350mm oo
dhumucdiisuna tahay 0.05mm ilaa 0.25mm